KU SAABSAN US - xarun caafimaad oo ilmo soo ridid ​​gaar loo leeyahay oo ku taal Falls Church, Virginia
Wax ka baro taariikhda, himilada iyo yoolalka xarunteena Rosemary Codding, aasaasaha FCHC iyo agaasimaha.
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church - Himiladayada
Falls Church Health Center - Taariikh
Xiriirkeena Bulshada iyo Fursadaha Tabaruca:
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church - Tabaruce
FCHC waxay ku taageertaa haweenka inay kaalin firfircoon ka qaataan caafimaadkooda iyagoo siinaya xirfadle, la awoodi karo, caafimaad qarsoodi ah iyo daryeelka ilmo iska soo rididda.
Asturnaanta, amniga iyo daryeelka shakhsi ahaaneed ee adiga, bukaankeenna, ayaa ah mudnaantayada.
Waxaan ku hormarinaa xuquuqda bukaan socodka dhamaan adeegyadayada. Ku celcelinta heerarka ugu sarreeya ee ACOG, Xiriirka Qaranka ee Ilmo iska soo rididda, iyo Waaxda Caafimaadka ee Virginia, waxaan leenahay diiwaanka badbaadada aan la barbardhigi karin ee daryeelka ilmo iska soo rididda.
Waxaan soo dhaweyneynaa bukaanada dhamaan dhaqamada, jihada galmada iyo muujinta jinsiga, oo ay kujiraan baahiyaha gaarka ah ee kuwa kuhadla luuqada caalamiga ah, dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo bukaanada Lesbian, Bisexual, Transgender iyo Queer Waxaan bixinaa faham, taageero, & daryeel caafimaad oo tayo leh. FCHC waa xarun bulshada ku jahaysan cudurada haweenka. Bukaannadeennu waxay ka faa'iideystaan ​​50-ka sano ee daryeelka caafimaadka taranka iyo haweenka ee shaqaalaheennu ay bixiyeen.
Waxaan ku bixinaa daryeel caafimaad oo xirfad iyo qarsoodi ah khidmadaha la awoodi karo ee bukaanka mushaharka qaaska ah leh oo soo dhaweynaya caymiska badankood, Qorshayaasha lacag bixinta ayaa loo diyaarin karaa sida qaarkood kaalmada maalgelinta labadaba cudurada dumarka ee lama filaanka ah iyo daryeelka ilmo iska soo rididda.
Naxariista, Ixtiraamka, Fahamka iyo Ixtiraamku waa rukummada ama cilaaqaadka naga dhexeeya bukaanka iyo shaqaalaha.
Shaqaalaheena iyo xarunta waxay ujeedadoodu tahay inay u abuuraan jawi aamin ah oo daryeel leh dhamaan bukaankeena. Waxaan soo dhaweyneynaa bukaanada dhamaan dhaqamada, jihada galmada iyo muujinta jinsiga, oo ay kujiraan baahiyaha gaarka ah ee bukaanada Lesbian, Bisexual, Transgender iyo Queer.
FCHC waxaa ka go'an fahamka, taageerada, daryeelka caafimaadka oo tayo leh.
Waxaan nahay MEEL AMAAN AH oo aan ku gaarno go'aan muhiim ah.
Shaqaalaheena dhakhaatiirta cudurada haweenka ee ruqsada haysta, kalkaaliyayaasha caafimaadka, barayaasha bukaanka, lataliyayaasha, iyo maamulayaasha waa xirfadlayaal ku takhasusay daryeelka caafimaadka taranka.
Shaqaalaheena iyo rugta caafimaadku waa luuqado badan iyo dhaqamo kala duwan.
Waxaa naga go'an in haweeney kasta ay xaq u leedahay inay kaqeybqaadato daryeelka caafimaadkeeda. Tan waxaa ka mid ah xaqa aad u leedahay in laga jawaabo su'aalahaaga iyo in lagugu wargeliyo cudurkaaga caafimaad, nidaamyada, dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo macluumaadka ku saabsan daawooyinka iyo waxyeellooyinka ka imaan kara
Mabaadi'dayada (Waxaan ku kalsoonahay inaad sameyn doonto go'aano sida ugu wanaagsan u kobcin doona mustaqbalkaaga, caqiidadaada, qalbigaaga, iyo qoyskaaga.)
Waxaan soo dhoweyneynaa hagaajinta iyo isbeddelada caafimaadka taranka si loo bixiyo daryeel habboon oo ku dayasho mudan.
Waxaan bixinaa oo aan ku xukumin, jawi taageero iyo daryeel leh.
Waxaan ku dadaalnaa inaan waxbarno bukaan kasta aqoysaskooda, si loo baro mabaadi'da aasaasiga ah ee caafimaadka.
Si loo bixiyo daryeel caafimaad guud oo taran.
Waxaan u qaabeyneynaa waxbarashadaada bukaanka, go'aan gaarista, habraacyada caafimaadka, iyo daryeelka la socoshada shaqsiyaadka aad doorbideyso iyo baahiyahaaga.
Waxaan ka caawinaynay haweenka iyo qoysaskooda inay go'aan ka gaaraan uurka aan la qorsheyn tan iyo 2002.
Waan ognahay inaad garawsantahay in mar alla markii aad uur yeelato aysan jirin waddo horey loo sii wado oo aan hurayn.
Qaran ahaan Loo Aqoonsaday
Falls Church Healthcare waxaa qaran ahaan loogu aqoonsaday u-doodistayada door-bid la'aanta ah tan iyo aasaaskeennii 2002.
Waxaan si xamaasad leh oo firfircoon uga soo horjeednaa weerarka siyaasadeed ee hadda lagu hayo xuquuqda taranka. Nagala soco bartayada Facebook.
FCHC waxay u shaqaysay sidii wada-kafaalaqaade Maarso Nolosha Haweenka iyo shaqaalaha iyo taageerayaashu waxay ku biireen Maarso Haweenka ee Washington oo hoos timaad calankeena "Keen Jacayl Kaliya".
Bukaannadii hore, dhakhaatiirta iyo wakaaladaha bulshada ayaa sii wadaya inay haweenka u diraan Xarunteena cusub ee dib loo cusbooneysiiyay, waxay markhaati ka tahay in bulshada ay sii wadayso inay aqoonsato tayada ayna qadarinayso adeegyada doorashada guud ee dhameystiran ee ay bixiso Xarunta iyo shaqaalaheena dadaalka badan.
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church waxay ku faantaa inay xubin ka tahay Xiriirka Qaranka ee Ilmo iska soo rididda, Shabakada Daryeelka Ilmo soo rididda, DC Doulas ee xulashada xulashada, Dhakhaatiirta Caafimaadka Taranka, Xarunta Xuquuqda Taranka, Kaatolikyada Xulista iyo sidoo kale Ururka Xirfadlayaasha Caafimaadka Taranka (ka hor intaan la xirin 2019). Waxaan nahay taageerayaal NARAL Virginia, Hawsha Difaaca Xarunta Caafimaadka ee Aagga Washington, ka Isbahaysiga diinta ee doorashada taranka, Iyo Iimaanka kor.
FCHC waxay ku qoran tahay Xarumaha Ilmo iska soo ridka Ilmaha, Ilmo iska soo ridid.com, Raadiyaha ilmo soo rididda iyo ineedana.com.
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo in hadda xarunteena ay tahay tii ugu horreysay ee ku taal Virginia iyo mid ka mid ah laba xaafadda DC Metropolitan adeegyada do-pro-doorashada bukaannadeena. Xor ayaad u tahay inaad waxbadan naga barato adoo wacaya.
# TAARIIKHDA TAARIIKHDA
Ha cabsan, #RealClinics waa halkaan. Qorshayaasha sharci -dejinta ee taageeraya rugaha been abuurka ah, waxaan rabnaa inaan hubinno bukaannadeenna iyo kuwa doonaya ilmo iska soo rididda, inaan nahay bixiye daryeel ilmo iska soo ridid ​​dhab ah. Mid ka mid ah oo bixisa dhammaan xulashooyinka uurkaaga, wuxuu taageeraa go'aannadaada wuxuuna ku siinayaa daryeelka caafimaad ee ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.